…. त्यसपछि राहुल रुँदै रुँदै पल्टन फर्किए (भिडियो हेर्नुहोस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/…. त्यसपछि राहुल रुँदै रुँदै पल्टन फर्किए (भिडियो हेर्नुहोस्)
सबै घटना भएपछि अहिले भारतीय सेनामा रहेका राहुल गुरुंग पल्टन फर्किएका छन् । उनको जीवनमा पछिल्लो केही महिना भित्र नसोचेको घटना भयो । परिवार अलग अलग भयो । दुख पनि पाए ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता उनकी सानी छोरीलाई के हुने भन्ने राहुलको पीर छ । सेनामा भएपनि राहुल कमलो मनका छन् । उनले भूपू भै सकेकी श्रीमति स्मिताले गरेको गल्तीलाई माफी दिने भनेका छन् । फेरी उनले भनेका छन् की राहुल भारतीय सेनाको पल्टनमा हुँदा राहुनको घरमा आउन र बस्न सक्छिन् ।